मंगल ग्रहले गर्यो आफ्नो राशि परिवर्तन, यी राशि हुनेहरुको लागि अत्यन्त शुभ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/मंगल ग्रहले गर्यो आफ्नो राशि परिवर्तन, यी राशि हुनेहरुको लागि अत्यन्त शुभ!
मंगल ग्रहले गर्यो आफ्नो राशि परिवर्तन, यी राशि हुनेहरुको लागि अत्यन्त शुभ!
मंगल ग्रह आज साँझ ६ बजेर ३० मिनेटमा मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गरेको छ र १० सेप्टेम्बर बिहान ३ बजेर ५० मिनेट सम्म यहि राशिमा रहनेछ। मंगलले राशि परिवर्तन गर्नु ज्योतिष शास्त्रमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। मंगल ग्रहको राशि परिवर्तनले सबै १२ वटै राशिमा प्रभाव पार्नेछ।
यस राशिको स्वामी मंगल ग्रह हो। स्वामी ग्रह यस राशिमा प्रवेश गर्नु मेष राशिका लागि वरदान हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा तपाईंको प्रभाव बढ्नेछ। नयाँ कार्य योजनाहरू पनि सफल हुनेछन्। सरकारी सेवाका लागि आवेदन दिनको लागि समय शुभ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि पनि समय अनुकूल छ। प्रेम मामलाको लागि भने समय उत्तम छैन। नव दम्पतिको लागि सन्तान प्राप्तिको योग देखिन्छ।
यस राशिको लागि मंगलको गोचर मिश्रित फलदायी रहनेछ। तपाईंको उर्जा शक्ति बढ्नेछ। वैदेशिक क्षेत्रबाट शुभ समाचार प्राप्त होला। आफन्त वा साथीबाट अशुभ समाचार प्राप्त हुने योग छ। सवारी साधनको प्रयोग ध्यानपूर्वक गर्नुहोला। सोच विचार गरेर मात्र महत्वपूर्ण निर्णय लिनुहोला, अन्यथा हानिकारक हुनसक्छ।
यस राशिको लागि मंगलको गोचर अत्यन्त शुभ रहनेछ। यदि तपाईं कुनै पनि महत्वपूर्ण काम शुरू गर्न वा निर्णय गर्न चाहानुहुन्छ भने परिणाम तपाईंको पक्षमा हुनेछ। आयको स्रोत बढ्नेछ। सरकारी क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। धेरै समय देखि अड्किएको पैसा फिर्ता आउने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ।
मंगलको राशि परिवर्तनले यस राशिमा राजयोग निर्माण गर्नेछ। त्यसैले गर्दा पदोन्नतीको योग बन्नेछ साथै कार्यक्षेत्रमा नयाँ अवसर मिल्नेछ। सरकारको क्षेत्रमा सेवा आदिका लागि आवेदन दिन समय शुभ रहेको छ। स्वास्थ्यमा भने केहि समस्या देखा पर्न सक्छ। वाहन तथा घर-जग्गा खरिद गर्नको लागि अत्यन्त शुभ छ। आफन्त तथा साथीबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ।
भाग्य भावमा मंगलको उपस्थिति सिंह राशिको लागि शुभ रहनेछ। तपाईंको साहस तथा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। धार्मिक तथा मांगलिक कार्यमा तपाईंको उपस्थिति बढ्नेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व बढ्नेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। नयाँ व्यापार तथा कार्य सुरु गर्नको लागि समय निकै शुभ रहनेछ।
यस राशिको लागि मंगलको गोचर मिश्रित फलदायी रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको नोक्सान हुनसक्छ, सतर्क रहनुहोला। आफन्तजनको साथ मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। आमा-बुवाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ। वाहन तथा घर-जग्गा खरिद गर्नको लागि समय उत्तम रहनेछ।
तुला राशिको लागि मंगलको गोचर शुभ रहनेछ। व्यापारीको लागि यो समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। सरकारी क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने सम्भावना रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। दाम्पत्य जीवनमा मदभेदको स्थिति आउनसक्छ।
स्वामी ग्रह मंगलको शत्रु भावमा उपस्थिति रहनु वृश्चिक राशिको लागि अत्यन्त शुभ रहनेछ। तपाईंका गोप्य शत्रुहरू पनि पराजित हुनेछन्। मातृ पक्षसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, ध्यान राख्नुहोला। आर्थिक लाभ मिल्नेछ तर कसैलाई पैसा दिनबाट जोगिनुहोला। धर्मको कुरामा रुचि बढ्नेछ। आफ्नो क्रोधमा भने संयम राख्नु पर्ने देखिन्छ।
मंगलको गोचर यस राशिको लागि त्यति शुभ नरहला। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटाव हुनसक्छ। आयमा वृद्धि हुनेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि समय निकै उत्तम रहेको छ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ताबाट मुक्ति मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। नव दम्पतिको लागि सन्तान प्राप्तिको योग रहेको छ। परिवारमा मदभेदको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
मकर राशिको लागि मंगल ग्रहको गोचर शुभ रहनेछ। वाहन तथा घर-जग्गा खरिद गर्नको लागि समय शभ रहनेछ। मित्र तथा आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ। सरकारी क्षेत्रमा पनि समय अनुकूल रहनेछ। विदेशी क्षेत्रमा सेवा आदिको लागि आवेदन दिनको लागि पनि समय उत्तम रहेको छ। परिवारमा भने मनमुटावको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।
मंगल ग्रहको गोचर कुम्भ राशिको लागि शुभ हुनेछ तर यस समयमा धन हानि हुनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। साथै आर्थिक लेन-देन पनि यो समयमा नगरेकै राम्रो हुनेछ। व्यापारमा विस्तार हुनेछ। सामाजिक मान-प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। विदेशी नागरिकताका लागि गरेको आवेदन सफल हुनेछ।
वाहन तथा घर खरिद गर्नको लागि समय शुभ रहनेछ। आर्थिक पक्ष मजबूत रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा भने केहि नोक्सान हुनसक्छ, सावधान रहनुहोला। स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। प्रतिस्पर्धामा राम्रो सफलता मिल्नेछ। सन्तान सम्बन्धि चिन्ताबाट मुक्ति मिल्नेछ।
रुखमा झुण्डिको अवस्थामा पुरुषको शव फेला